प्लास्टिकको बोतलमा पानी पिउँदा प्रजनन क्षमतामा असर, गर्भमा हुर्कर्दै गरेको बच्चाको विकास रोकिने « रिपोर्टर्स नेपाल
प्लास्टिकको बोतलमा पानी पिउँदा प्रजनन क्षमतामा असर, गर्भमा हुर्कर्दै गरेको बच्चाको विकास रोकिने
प्रकाशित मिति : 2022 April 10, 12:15 pm
एजेन्सी, २७ चैत्र । धेरैले घरमा आएको चिसो पेयको बोतललाई पुनः प्रयोग गर्छन्। यसमा पानी भर्ने वा भान्साको कुनै सामान राख्ने । यदि तपाईंले पनि यसरी बोतल प्रयोग गर्ने गल्ती गर्नुभयो भने सावधानी अपनाउनु पर्छ। डाइट हर्ब्स इन्डियाकी डा. श्री ललिता अविनाशले प्लाष्टिकको बोतलमा पानी पिउनुको हानिबारे बताउनुहुन्छ।
प्लास्टिकको बोतल किन प्रयोग नगर्ने ?
प्लास्टिकका बोतलहरू धेरै रसायनहरू मिसाएर बनाइन्छ। चिसो पेय वा पानीका बोतलहरू एक पटक मात्र प्रयोगको लागि डिजाइन गरिएको हो। तर पुरानो बानीका कारण हामी यसलाई बारम्बार प्रयोग गर्छौं। कहिले पानी भरेर, कहिले अरू केही राखेर। बोतल होस् वा कन्टेनर, तपाईले देख्नुहुनेछ कि प्लास्टिकबाट बनेका चीजहरूमा तीन तीरको मद्दतले त्रिकोण बनाइएको छ। वास्तवमा यो राल पहिचान कोड हो। ताकि यो प्लाष्टिकको बोतल÷कन्टेनर कुन सामाग्रीबाट तयार गरिएको हो थाहा पाउन सकिन्छ। धेरैजसोले यसतर्फ ध्यान दिँदैनन् । जसका कारण सबै प्रकारका केमिकलबाट बनेका प्लाष्टिकका बोतलको प्रयोग जारी छ । जसका कारण स्वास्थ्यमा गम्भीर जोखिम हुनसक्छ ।
प्लाष्टिकको बोतलमा पानी राख्ने बानी वयस्क र बालबालिकाका लागि हानिकारक छ ।
प्लास्टिकमा पोलिमर प्लास्टिक सबैभन्दा बढी प्रयोग गरिन्छ। यसको कारण लागत र प्रयास हो। पोलिमर प्लास्टिक बनाउन लागत कम छ र यो बनाउन पनि सजिलो छ। यसको दोस्रो विशेषता यो हो कि यसमा प्याकेज गरिएका खाद्य वस्तुहरू दूषित हुँदैनन्। अर्थात् दूध, दही, लस्सी, छाछ, जुस र पानी सबै यसमा सुरक्षित रहन सक्छ। यद्यपि, यो पनि बाहिर आएको छ कि पोलिमर प्लास्टिकमा बन्द खाद्य पदार्थहरूले प्रत्यक्ष गर्मीमा पर्दा नोनाइल फिनोल रसायनहरू छोड्छ। यी रसायनहरू खाद्य पदार्थको माध्यमबाट शरीरमा प्रवेश गर्छ र स्वास्थ्यलाई हानि पु¥याउँछ। तसर्थ, प्लास्टिक बन्द खाद्य वस्तुहरू गर्मी र घामबाट टाढा राख्नु महत्त्वपूर्ण छ।
प्लास्टिकको सट्टा सिसा, बाँस वा तामाको बोतलको प्रयोग स्वास्थ्यका लागि सुरक्षित मानिन्छ ।
-यदि बच्चाहरूले यसको प्रयोग गरेमा तिनीहरूको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर हुन सक्छ।
-प्लास्टिकको बोतलमा पानी लामो समयसम्म पिउनाले क्यान्सरको खतरा बढ्छ ।
-गर्भवती महिलाले प्लाष्टिकको बोतलको पानी पिउँदा बच्चाको विकासमा असर गर्छ ।
-प्लास्टिकमा पाइने केमिकलले महिला र पुरुष दुवैमा बाँझोपन निम्त्याउन सक्छ ।
-पानी भण्डारण गर्न कोल्ड ड्रिंकको बोतल प्रयोग नगर्नुहोस्। यसलाई डिस्पोज गर्नुहोस्।
प्लास्टिक होइन, यी बोतलमा पानी पिउनु फाइदाजनक हुन्छ
गिलास – पिउने पानीको लागि प्लास्टिकको सट्टा सिसाका बोतलहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ। गिलासको विशेषता भनेको शतप्रतिशत रिसाइकल गर्न सकिने छ । यसले प्रकृतिलाई हानी गर्दैन र स्वास्थ्यका लागि प्लास्टिकको बोतलभन्दा पनि राम्रो विकल्प साबित हुन्छ।
बाँस– प्राकृतिक सम्पदा बाँसबाट बनेको बोतलमा पानी पिउनुका धेरै फाइदाहरू छन्। यसले बुढ्यौलीका लक्षणहरूलाई कम गर्छ, हड्डीलाई बलियो बनाउँछ, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनुका साथै कोलेस्ट्रोल घटाउन मद्दत गर्छ। बाँसबाट बनेका बोतलहरू वातावरणका लागि पूर्ण रूपमा सुरक्षित हुन्छन्।
स्टिल– स्टिलको बोतल प्रयोग गर्नु पनि राम्रो विकल्प हो। धातु भएकाले यसलाई सुरक्षित राख्न धेरै मेहनत गर्नु पर्दैन । साथै, इन्सुलेटेड स्टेनलेस स्टीलका बोतलहरूले तरल पदार्थलाई लामो समयसम्म चिसो र तातो राख्छ।
तामा– यस धातुबाट बनेको बोतलले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई बलियो राख्छ । तामाको भाँडोमा राखिएको पानी पिउनाले शरीरको डिटोक्स हुन्छ । तौल घटाउनुका साथै छालालाई जवान राख्न र जोर्नी दुखाइ कम गर्नमा पनि प्रभावकारी साबित हुन्छ। Photo:Google